Brunettes लागि रातो लिपस्टिक - मेकअप को विज्ञान मा एक अलग खण्ड। शताब्दीयौंदेखि, यो रंग मुख्य रूप सबै महिलाहरु द्वारा क्रममा यसको सौन्दर्य र expressiveness हाइलाइट गर्न प्रयोग भएको थियो। निस्सन्देह, सबै भन्दा स्पष्ट छ, उहाँले अन्धकारमा-haired महिला देख्यो कि प्रकृति नै पहिले नै पेंट्स यस्तो expressive सेट प्रदान गरेको छ छ। Brunettes लागि रातो लिपस्टिक चयन गर्ने बारे, जो अवस्थामा यो उपयुक्त छ र कुन रंग जस्तै सान्दर्भिक आज - तल हेर्नुहोस्।
लिपस्टिक र फैशन को विविधता
अचम्मको कुरा, यो ओठको मेकअप हाम्रो दिन उज्ज्वल रंग थियो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रुझान को एक हो। तर यो टिप्पण कि, लायक छ हामीलाई स्पष्ट रातो लिपस्टिक देखाउँछ कि बनाउन-अप चमक गर्न र शानदार, अब वोग ठूलो संयम र conciseness मा थियो जब पछिल्लो वर्ष, विपरीत। आधुनिक fashionistas को समीक्षा भन्ने तथ्यलाई पुष्टि ओठ बनाउन-अप अपारदर्शी हुनुपर्छ, तर एकै समयमा expressive र कुरकुरा। यो मेकअप सानो सेक्विन र अनावश्यक रोशनी बिना, जो, बारी मा, मैट हुनुपर्छ लिपस्टिक, को गाढा टोन मा एक पेन्सिल राख्नु पर्छ भन्ने हो। यो पनि उल्लेख गर्नुपर्छ कि Brunettes लागि मत्ती रातो लिपस्टिक - दुवै दल र दैनिक कामको लागि आदर्श। संयोजन मा टोन जस्तै कालो कपाल हेर्न संग हुनेछ आकर्षक, तर defiantly, कि एक आधुनिक केटी को आकर्षण को लागि एक आवश्यक मापदण्ड छ।
कसरी tsvetotipa आधारमा रातो लिपस्टिक चयन गर्न?
पनि यो कागज मा हामी गाढा कपाल मात्र महिला विचार भन्ने तथ्यलाई बावजुद, तिनीहरूले पनि फरक tsvetotip मा, छाला टोन र बाल आफूलाई, साथै आँखा रंग आधारमा विभाजित छन्। पहिलो, हामी जो दुवै खैरो र हुन सक्छ, निष्पक्ष छाला संग बालिका छलफल खैरो आँखा। यस्तो मा एक पृष्ठभूमि पूर्ण रातो, Cranberry र हेर्नेछौं , ऐंसेलु रंग तिनीहरूले मैट चमक हुनेछ विशेष गरी भने। यो संयोजन अलि दिन्छ कि नोट , रेट्रो शैली आवश्यक लुगा र सामान उपयुक्त चयन गर्न त। अन्यथा ओठ मा उज्ज्वल रंग पनि छैन मात्र निरर्थक, तर छाडा हेर्न हुनेछ। दोस्रो श्रेणी मा गाढा छाला, खैरो र हरियो आँखाले महिलाहरु विचार गर्दै छन्। यस मामला मा, सबै भन्दा आदर्श एक कोरल टोन छन्, तर संतृप्त गर्दा अलिकति मौन गरियो। तर प्राच्य वा ल्याटिन लग संग रातो लिपस्टिक महिला कसरी चयन गर्न, उहाँले लगभग सबैलाई थाह छ। यस मामला मा, आदर्श माणिक, लाल रंग र क्रिमसन टन हुनेछ।
रातो टोन ओठ गर्न बनाउन-अप थप सुविधाहरू
रूपमा स्पष्ट भएको छ, Brunettes लागि रातो लिपस्टिक - मात्र आँखा तेतैतिर युद्घाभ्यास, तर पनि सबै पत्रिका मा हाल मौसम मा thundered जो एक फैशन प्रवृत्ति छ। तथापि, कसरी, रहनसहन पूर्ण छवि यस्तो दिइएको सिर्जना गर्न एक उज्ज्वल रंग को ओठको? यो चुनौती बुझ्न र तरिका पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्। पहिलो, ध्यान फेरि छाला को रंग मा छ। तपाईं को मालिक हुनुहुन्छ भने "दुग्ध" प्रकार र रंग र लिपस्टिक चिसो हुनुपर्छ, र एक बनाउन-अप सबै अन्य घटक। एक शताब्दी लागि खैरो छाया, आँखा को माथिल्लो किनारा मा सीधा कालो तीर चलाउन रुचि cheekbones, फिक्का गुलाबी, मोती वा बैजनी शरमाना जोड। को भने रातो को रंग Brunettes लागि लिपस्टिक को न्यानो रंग देखि चयन गरिएका छन्, आँखा, तपाईं खैरो छाया चयन गर्न सक्नुहुन्छ, र लागू cheekbones मा एक सानो कांस्य। बस यो मेकअप अँध्यारो वा tanned छाला को प्रकृति मा सिद्ध हेर्न भनेर नबिर्स।
रंग बारेमा केहि सुझाव
यो फेसन रुझान निर्भर कि गर्दैन, नयाँ उत्पादन र समय डिजाइन एक क्लासिक छ - को पाठ्यक्रम, सबै स्टाइलिस्ट को ओठ मा रातो रंग कि एउटै स्वरमा भन्नुहोस्। अक्सर, यस्तो कोको Shanel गरेर सानो कालो पोशाक, वास्तविक फ्रान्सेली अत्तर, उच्च गुणस्तरीय उच्च एडी संग तुलना बनाउन-अप। यो त्यो सही समयमा यसको प्रयोग गर्न सक्छ भनेर रातो लिपस्टिक एक ट्यूब, हरेक स्त्रीको पर्स मा निहित छ कि सुझाव। तर यहाँ तपाईं यो धेरै उज्ज्वल लिपस्टिक राम्ररी लिपस्टिक छन् कि बारे एउटा प्रश्न छ। साँच्चै, लागू गर्दा ओठ मा दिइएको पिच अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्दछ, र एक निश्चित प्रतिभा छ, अन्यथा परिणाम यस्तै काम हास्यास्पद हेर्न थियो। तसर्थ, हामी कसरी यो साँच्चै शानदार हेर्न बनाउन, रातो लिपस्टिक संग ओठ रंग गर्न देखो हुनेछ।
पहिलो, स्ट्रोक सुरु। तपाईंको विचार देखिने आकृति को अगाडी उपस्थिति नबुझाउन छैन भने पनि, यो रंग को मुख्य घटक यसको आकृति परे जान गर्नुभयो र गंदा छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न विद्यमान हुनुपर्छ। यो गर्न, माथि टोन मा एक पेन्सिल टोन छनोट, र त्यो सबै छ। पूर्णतया फैशन पालना भने, तपाईं शायद ओठको आकृति आफ्नो प्राथमिक रंग भन्दा अलिकति गाढा हुनुपर्छ भनेर थाह छ। त्यसैले, यो ध्यानपूर्वक र समान रूप कोर्नुहोस् र त्यसपछि छाला भन्दा रंग।
दिन र रात - फरक के?
हामीलाई विभिन्न समयमा उनको ओठ मा नुन उज्ज्वल रंग को औचित्य को प्रश्न गर्न र विभिन्न ठाउँमा फर्कन गरौं। हालैका वर्षहरूमा फैशन हामीलाई dictated प्राकृतिक, त्यसैले उनको ओठ एक पारदर्शी चमक, आँखा मा जोर संग रंग गर्न accustomed छन् धेरै। अब यी सबै ठाउँहरू परिवर्तन र के हुन्छ हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं सधैंभरि उपेक्षा, काम आफ्नो ओठ क्रिमसन, कोरल वा Cranberry लिपस्टिक, को रोमक भन्दा मात्र रंग हाइलाइट, विश्वास मलाई जाँदै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो छवि कार्यालय लागि उपयुक्त भन्दा बढी हुनेछ। महत्वपूर्ण, आफ्नो लाइन चिल्लो (तर उज्ज्वल छैन) थियो भनेर eyebrows एक सानो जोड, र शरमाना को पातलो पत्र लागू भूल छैन। कि मेकअप एकल रंग मा राख्नुपर्छ सम्झना। तपाईं एक पक्ष जाँदैछन् भने, रातो लिपस्टिक गर्न सही साथी हुनेछ धुवाँ आँखा बनाउन। विभिन्न tsvetotip संग रातो लिपस्टिक श्यामला कसरी चयन गर्न, हामी पहिले नै बाहिर समझ गर्नुभएको छ, र उपयुक्त आँखा मेकअप यसलाई "संलग्न" यति गाह्रो छैन। बस ओठको एक स्पर्श लागि बाहिर हेर्न - यो चिसो वा न्यानो छ, र यो निर्भर छाया र काजल चयन गर्नुहोस्।
वस्त्र, रातो ओठ emphasizing
माथि, छवि एकीकृत गरिएको उल्लेख, यो competently मेकअप लागू, तर पनि उपयुक्त वस्त्र चयन गर्न मात्र होइन महत्त्वपूर्ण छ। क्लासिक र साँझ - रातो लिपस्टिक सही दुई शैलीहरू देखिन्छ। पहिलो मामला मा यो पोशाक, आफ्नो शैली र रंग ध्यान आवश्यक छ। तपाईं सफेद मा काले पोशाक रातो ओठ, र बेज र प्यास्टेल कपडे केही रंग संग अनूठा हुनेछु। तर, कुनै मामला मा उज्ज्वल साँझ कपडे (नीलो, हरियो, पहेंलो र यति मा) संग लाल रंग लिपस्टिक संयोजन छैन। एउटै व्यापार सूट लागू हुन्छ। Brunettes, एक सख्त र धेरै expressive को प्रकृति मा जसको उपस्थिति, एक मानक पेन्सिल स्कर्ट र नजिक उपयुक्त ज्याकेट प्रयोग गरेर यसलाई बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। यो किरा कालो जस्तै र सेतो कपडा मा crosslinked गर्न सकिन्छ। रातो थैली र कंगन वा कान को बाली, जूता को छवि पूरा लुगा मा टोन पिक अप।
एक सानो पोष्टस्क्रिप्ट
रातो लिपस्टिक श्यामला चयन गर्ने बारे, तपाईं उमेरका लागि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। लेख मा यो तपाईं फेशन र सौन्दर्य को दुनिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने कारक सारांश अनुमानित तर्क प्रस्तुत गरियो। वास्तवमा, यस्तो उज्ज्वल सहायक को विकल्प - जो पनि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण आवश्यक स्वाद को एक कुरा। त्यसैले, प्रयास, प्रयोग, परामर्श र सधैं आफ्नो सर्वश्रेष्ठ हेर्न प्रयास गर्नुहोस्।
मूल र लोकप्रिय अत्तर Chloe
कम्पनी EOS देखि कस्मेटिक्स नयाँ सुविधा - लिप बाम
कसरी हरियो आँखा लागि दैनिक मेकअप गर्न: सिफारिसहरू र फोटो
कसरी आकर्षित गर्न तीर - सुझावहरू लागि शुरुआती र मात्र
"Oriflejm" मसी "5 1 मा"। काजल Oriflame: मूल्य र समीक्षा
इत्र, शौचालय वा Eau डे Parfum - के चयन गर्न?
बीउ देखि एक फूल कसरी बढ्न? गुलाब को बीउ कसरी रोपण छन्?
टैटू: प्रतीकात्मक रूप, व्याख्या र अर्थ। चन्द्र (टाटु): त्यो आफ्नो possessor बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ?
अभ्यास लागि रोलर प्रेस: व्यापक काम शरीर
बेचैन गुस्ताव Aimard। साहसिक लेखक